Shirkada Ugu Wayn Macmacaanka Iyo Chocolate-ka Dalka Belgium Oo Iska Badashay Magaceedi (ISIS) | Hawraar
Shirkada Ugu Wayn Macmacaanka Iyo Chocolate-ka Dalka Belgium Oo Iska Badashay Magaceedi (ISIS)
Sida ay ku warantay wakaalada wararka Reuters, shirkada ugu balaadhan dalka Belgium ee farsamaysa, cuntooyinka Macmacaan iyo waxyabaha Chocolate-ka ah, ee magaceeda loo soo gaabiyo (ISIS), ayaa la dhib mudatay magaceeda lixdii bilood ee ugu danbeeyay, ka dib markii ay la baxday, kooxda Dacish ee dawlada Sham iyo Iraq isku magacawdaa, magaca (ISIS).
Shirkadan oo la aasaasay sanadkii 1926-dii, waxa markii ugu horeeyay magaceedu ahaa, (Italo Suisse), taas oo macno ahaan u dhignayd, Talyaani iyo Iswiserlan, laakiin waxa magacaas laga badalay, sanad ka hor, ka dib markii ay mulkiilayaasha shirkadu ka wareegtay Talyaanigii iyo Iswiiserlan-kii wada lahaan jiray, waxaanay u bixiyeen, magac ka gaaban kii hore oo ah (ISIS).
Hasa yeeshee magacaasi intii aanu sanadkii labaad u curan, ayaa shirkadu ka adkaysan kari wayday, culayska kaga imanaya macaamiisheeda, kuwaas oo ka cabanaya magaca (ISIS), waxaanay sheegeen in talo ururin ay ka dhex sameeyeen shacabka iyo macaamiisha dhexdooda ka heleen, in si wayn looga soo hor jeedo magacooda.
Waxaanay taasi ku kaliftay in shirkadu fagaare kaga dhawaaqday in magacii ISIS ay iska badashay, oo la baxday magac cusub oo noqonaya (Lippert), waxaana magacan cusub ee shirkadu la baxday ka soo jeeda magaca qoyska iska leh, saamiga ugu badan ee lacagta shirkada.
Sida wakalaadu sheegtay waxa shirkadani ka baqatay in magaceedi (ISIS) ay ku waydo suuq badan oo ganacsi, ka dib markii sida mulkiilayaashu sheegeen ay macaamiil badani ka cabatay magaca shirkada, kaas oo lix bilood ka hor caadi ahaa oo aanay waxba u arki jirin, laakiin markii kooxda Dacish la baxday magacaas uu laf dhuun gashay ku noqday dadkii macaamiishau ahaa shirkadan.
Shirkada (ISIS) ee imikana la baxday (Lippert), ayaa ka mid ah kuwa dunida ugu horeeya, samaynta macmacaanada iyo Chocolate-ka, waxaanay sanadkii soo saarta, shan kun oo tan oo Chocolate ah, taas oo ay ka hesho aduun lacageed oo dhan, 35 million euros (oo u dhiganta, 44.17 million dollars).